ओली–देउवा भेटवार्ताले कांग्रेसमा भुकम्प ! — Motivatenews.Com
ओली–देउवा भेटवार्ताले कांग्रेसमा भुकम्प !
काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गोप्य भेट भएको विषय बाहिरिएपछि नेपाली राजनीति तरङ्गीत भएको छ । कांग्रेसको सहभागितामा सरकार बन्न लागेको भनेर समाचार आउन थालेपछि काँग्रेसभित्र ठूलो भुकम्प गएको छ ।
गोप्य भेटघाटको कुराहरु बाहिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आक्रोष पोखेका छन । उनले नेपाली कांग्रेस पाँच वर्ष सरकारमा नजाने स्पष्ट पार्दैै सरकारमा जाने विषयमा भ्रम नफैलाउन भनेका छन ।
आइतबार एक ट्विट गर्दै उनले भनेका छन्, ‘भ्रम कोही कसैलाई केही छ भने पाँच वर्ष विपक्षमा बस्ने प्रष्ट जनादेश छ कांग्रेसलाई । अतः कुनै पनि भड्कावबाट टाढा छौं, रहनेछौं । नेकपाको द्वन्द्वसँग विलकुल निरपेक्ष छौं । अत यता या उताको जोड घटाउमा कांग्रेसको शीर गन्ने धृष्टता कोहीबाट नहोस्, सजग गराउँदछौं ।’
देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेसँगै विभिन्न खबरहरु बाहिरिएका छन् । उनले नेकपाभित्र कतिपयले कांग्रेसको टाउको गनेर आफू बलियो बन्ने काम गरिरहेको संकेत गर्दै उक्त काम नगर्न चेतावनी दिएका हुन् ।